किनारामा काफ्का, "पप" उपन्यास वा साहित्यिक नवीनता? | वर्तमान साहित्य
जुआन अर्टिज | | धेरै
विश्व साहित्यको वर्तमान दृश्यको लेखक हरुकी मुरकामीको कथाको लागि महत्त्वपूर्ण स्थान छ Kafka किनारमा (२००२) यस जापानी लेखकका पाठकहरूले कति मन पराउँछन् भन्ने कुरालाई अस्वीकार नगरी यस कामको बारेमा सबै कुरा भनिएको छ। र यो यो हो कि मुरकामीको शैली बेवास्तायुक्त वायुमण्डल हो, यथार्थपरकवाद वा जादुई यथार्थवादको नजिक, यस उपन्यासमा स्पष्ट छ।
तसर्थ, एक "Murakamian" संसारको कुरा गर्न सक्दछ, जहाँ पात्रहरूको जीवन रहस्यमय र विवादास्पद छ। यो उपन्यास हो जसको षडयन्त्र दुई चरित्र वरिपरि घुम्छ, एक जवान र अर्को ठूलो, उनीहरूको परिस्थितिबाट सर्त।। सैद्धान्तिक रूपमा उनीहरूका कथाहरू एक अर्कासँग सम्बन्धित देखिदैनन्, तथापि, मुरकामीले उनीहरूसँग सम्बन्धित हुन एक सहज तरीका सिर्जना गर्दछ।
1 लेखक, Haruki Muakaami मा केहि जीवनी जानकारी
1.1 साहित्यिक अभिषेक
1.2 मुरकामीका अन्य बेच्ने उपन्यासहरू
1.3 मुरक्कमीमा साहित्य: शैली र प्रभावहरू
2 किनारमा काफ्काको सारांश
2.1 समानान्तर कथा
3 किनारमा काफ्का विश्लेषण
3.1 तपाईंको साहित्यिक प्रस्तावको प्रासंगिकता
3.2 जादू र वास्तविक बीचको उपन्यास
3.3 आलोचनात्मक आवाजहरू
3.4 गहन मानव विषयवस्तु
लेखक, Haruki Muakaami मा केहि जीवनी जानकारी
हारुकी मुरकामी एक लेखक र अनुवादक हुन् जुन १२ जनवरी, १ 12। On मा क्योटो सहरमा जन्मेका थिए। बाल्यकालमा उनले जापानी र बौद्ध धार्मिक शिक्षा आफ्नो बुवा हजुरबुवाबाट प्राप्त गरे, जबकि एक व्यापारी आमासँग हुर्किए। पछि, उनी वासेडा विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरे, जहाँ उनले हेलेनिक साहित्य र नाटकको अध्ययन गरे।
माथि उल्लिखित अध्ययन गृहमा उनले आफ्नो भावी पत्नी, योकोसँग भेट गरे। पछि उनीहरूले बच्चा नजन्माउने निर्णय गरे, बरु उनीहरूले टोकियोमा पिटर क्याट भनिने आफ्नै जाज क्लब फेला पार्ने निर्णय गरे। साथै बेसबलका प्रशंसकका रूपमा उनी धेरै खेलहरूमा भाग लिए। त्यसो भए, एक खेलको समयमा बलमा हिटले उनलाई पहिलो उपन्यास लेख्न प्रेरित गर्‍यो, हावाको गीत सुन्नुहोस् (1973)।
मुरक्कामीको पहिलो लिखित प्रकाशनहरूमा पर्याप्त कम सम्पादकीय संख्याहरू थिए। यस अवस्थाको बाबजुद पनि जापानी अक्षरका मानिस निराश भएनन्, बरु उसले वास्तविक र सपना जस्तो सीमाना रहित पाठहरू सिर्जना गर्न जारी राख्यो।
१ 80 s० को दशकमा यसको सुरूवात भयो पिनबल १ 1973 1980 (१ XNUMX )०) y जंगली भेडाको खोजी (१ 1982 XNUMX२) अन्तमा, 1987 मा, टोकियो ब्लूज (नर्वेइजीयन वुड)) मुराकामी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ख्याती ल्याए। त्यो वर्षदेखि, जापानी लेखकले नौ उपन्यास, पाँच कथाहरूको संग्रह र विभिन्न प्रकारका बिभिन्न प्रकारका पाठ प्रकाशित गरे सचित्र कथाहरू, निबन्ध र पुस्तकहरू सम्वादहरूको।
मुरकामीका अन्य बेच्ने उपन्यासहरू
नृत्य नृत्य नृत्य (1988)
संसारलाई हावामा चराको क्रानिकल (1995)
कमाण्डरको मृत्यु (2017)
मुरक्कमीमा साहित्य: शैली र प्रभावहरू
हारुकी मुरकामी र उनकी श्रीमती सन् १ 1995 XNUMX until सम्म संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपको बीचमा बस्थे, जब तिनीहरूले जापान फर्कने निर्णय गरे। यसै बीच, साहित्यिक संसारमा उनको मान्यता बढ्दै थियो। यद्यपि ती घटनाहरूमा उनलाई पूर्व र पश्चिम दुबै आलोचनात्मक आवाजले कमजोर पारेको थियो।
थप रूपमा, को प्रकाशन Kafka किनारमा २००२ मा उनले किओटेन्से लेखकलाई अझ व्यापक रूपमा पढ्न र आफ्नो प्रतिष्ठा यति उच्च बनाए कि उनलाई धेरै अवसरमा नोबेल पुरस्कारका लागि मनोनयन गरिएको छ। अर्कोतर्फ, उनको साहित्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव संगीत - जाज, मुख्यतया - र उत्तर अमेरिकी कथा हुनेछ स्कट फिजजेराल्ड वा रेमंड कारभर जस्ता लेखकहरूबाट।
सारांश Kafka किनारमा
युवा तामुरा आफ्नो बुबासँग बस्छिन्, जससँग तपाईको नराम्रो सम्बन्ध छ, अझ नराम्रो कुरा गर्नका लागि, तिनीहरूका आमा र बहिनीले उनीहरूलाई त्यागे जब त्यो सानो थियो। यस सन्दर्भमा, नायक घर देखि भाग्छ पन्ध्र वर्ष पछि हो, अब काफ्का तामुरा दक्षिणामा जाँदै छ, तकामात्सुमा।
त्यो बिन्दुमा एउटा अपरिहार्य प्रश्न खडा हुन्छ: नायक किन भाग्छ? जवाफको साथ, यथार्थपरक तत्त्वहरू सुरु हुन्छ, किनकि काफ्का तामुराका बुबाले उनका छोरा, ओडिपस रेक्सले जस्तै उनको आमा र बहिनीसँग सुत्नको लागि मार्न खोजेको आरोप लगाए।
Kafka किनारमा (MAXI)
अर्कोतर्फ, सातोरु नाकाटालाई परिचय दिइएको छ, एक बुढा मान्छे जसले आफ्नो बाल्यकालमा एक अकल्पनीय अनुभव बिताए। विशेष रूपमा, उसले चेतना गुमायो र जागृति हुँदा उसले मेमोरी र संचार संकायहरू हरायो, साथै: उनी बिरालाहरूसँग कुरा गर्न सक्थे। यसै कारणले, उसले जताततै फ्याँकहरू बचाउन आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने निर्णय गरे र बिरालाहरूसँग जोडी जोनी वाल्कन नामको चरित्रमा आयो।
ताकामात्सु पुगेपछि काफ्का तामुराले पुस्तकालयमा शरण पाए। त्यहाँ श्रीमती साकी (निर्देशक) र ओशिमा नायकलाई सहयोग गर्छन्। अर्को, काफ्का तामुरासँग यी पात्रहरूसँग रोचक दृष्टिकोणहरू छन् र ओशिमामा आफैंको बारेमा खुलासा गर्ने स्रोत पत्ता लगाउँदछन्।
पछि, नाकाटाले पत्ता लगाए कि जोनी वाल्कन वास्तवमा एक दुष्ट मानिस थिए जसले फिलालाई मार्छन्। फलस्वरूप, उसले उनलाई सामना नगरुन्जेल उनी (बिरालाहरूको सहायताले) पराजित हुन्छन्। त्यस पछि, ती वृद्ध मानिस टाकामात्सुमा तामुरालाई भेट्छन् एउटा अद्भुत मेटाफिजिकल विमानमा प्रवेश गरेर। त्यसो भए, क्रमिक रूपमा, कहानीको सबै सदस्यहरूको जीवन पुस्तकको अन्त्य सम्म कुनै थप व्याख्या बिना एक अर्कामा बाँधिएको छ।
Análisis Kafka किनारमा
तपाईंको साहित्यिक प्रस्तावको प्रासंगिकता
उपन्यासको कथा Kafka किनारमा धेरै मार्गहरूमा सामेल हुन कोसिस गर्नुहोस्, एक अर्काबाट टाढा देखिन्छ, घटनाहरूको थ्रेड निर्देशन गर्न। यस प्रकार, पाठकको उत्सुकता बढ्दछ किनकि कथाहरू धेरै मिल्दोजुल्दो छैनन् उजागर गरियो।
यस उपन्यासको मामलामा, दुई कथाहरूको अल्टर्नेसनको कारण बुझ्नको लागि यसलाई अलि गाह्रो हुन सक्छ - सुरुमा - निराश। यसको बाबजुद पनि, पाठकहरू उत्सुक र कष्टकर घटनाहरूको चरित्रका घटनाहरू घट्दै जान्छन् भन्ने बारे जान्न वरिपरि छन्। अन्तमा, कथाहरू सँगै राख्नका लागि अविश्वसनीय तरीका छ, कल्पना प्रयोग गरेर।
जादू र वास्तविक बीचको उपन्यास
सामान्यतया, द्वारा प्रस्तावित साहित्य हारुकी मुरकामी यसले एकल सौन्दर्य एकाई भित्र समावेश दुई आयामको मिश्रण समावेश गर्दछ। अर्को शब्दमा, कथाको दृष्टिकोण कुनै पनि समस्या बिना अलौकिक परिस्थितिहरूमा देखा पर्नको पूर्ण वास्तविक कथाबाट अघि बढ्न सक्छ। त्यस्तो हदसम्म कि काल्पनिक तथ्यहरू सत्यको रूपमा लिइन्छन्।
केही आलोचनात्मक क्षेत्रले जापानी लेखकको कथालाई "पप उपन्यास" को रूपमा वर्णन गरेको छ, भरपर्दो सन्दर्भहरू समावेश गर्दै (ट्रेडमार्क, उदाहरणका लागि)। समानान्तरमा, वास्तविकता लुकेको छ थोर - थोरै असम्भव प्रश्नहरू प्रस्तुत गरेको कारण। पछिल्लो स्रोत हो सबै भन्दा धेरै Murakam को बारे मा उल्लेख छi, दुबै उहाँका अपमानकर्ताहरू र आफ्ना लाखौं अनुयायीहरूका लागि।
गहन मानव विषयवस्तु
अरूमा जस्तै सबै भन्दा राम्रो विक्रेताहरू जापानी लेखकबाट, Kafka किनारमा योसँग विषयगत जटिलता छ (विरोधाभासपूर्ण रूपमा) पढ्न सजिलो छ। यस बिन्दुमा, मानिसका लागि आलोचनात्मक मुद्दाहरूको दृष्टिकोण (प्रेम, एकाकीपन, उदासिनता) ... पाठकलाई हिक गर्न महत्वपूर्ण छ।
वास्तवमा, प्रत्येक कथा, यद्यपि यो जटिल हुन सक्छ, पीडा प्रस्तुत छ कि एक्लै र एक्लो (Satoru Nakaata) र बाहिर जाने बाटो प्रतिनिधित्व गर्दछ। जबकि, पारिवारिक सम्बन्धको विषयवस्तु र एक ठाउँ छोड्दासम्म महसुस नगरेको परिणामहरूको परिणाम (काफ्का तामुरा), मानव जीवनमा नै औंल्याउँछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » धेरै » Kafka किनारमा
बर्नार्ड मिनियर। मेजर मार्टिन सर्भाज द्वारा उनको श्रृंखला को समीक्षा